Ingxangxasi Chalet. Ezothando, indalo kunye nokutshona kwelanga. - I-Airbnb
Ingxangxasi Chalet. Ezothando, indalo kunye nokutshona kwelanga.
Córrego do Bom Jesus , Minas Gerais, Brazil
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLuciano Pereira
ULuciano Pereira yi-Superhost
ESerra das Águas le Chalet iyakhuthaza, inothando ngengxangxasi yabucala, indawo yokuhamba kunye nembono yepanoramic yolwandle lweentaba zeMinas Gerais ezijonge ukutshona kwelanga. Ilungele izibini. Ukuba umhla owufunayo awukho, jonga izithuba ezininzi eChalé Por do Sol: https://abnb.me/AcoCQEdrdlb
okanye udibane nathi!
UChalé Cachoeira walungiselelwa umzuzwana wokuphumla kwaye lelona thuba lifanelekileyo lokuyeka ukunxibelelana kancinci kwindlela yesixeko okanye ukuba wedwa ekhaya, yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka yothando, yadwa, ikhuselekile kwaye inomtsalane kakhulu. Apha uya kubona isandi seentaka, umoya kwaye ngakumbi amanzi eengxangxasi zethu. Ungayonwabela igadi yethu yangasemva, ungaphumla ngaphakathi kunye nendawo yethu yomlilo ethandekayo ukufudumala kwaye ukonwabele umbono ongenakuphoswa wokutshona kwelanga kwibalcony yethu, nokuba kukwi-hammock okanye ezitulweni. (ungalibali iwayini oyithandayo, imozulu apha ilungile kwiwayini). Zive umoya omtsha weMantiqueira ekwanga kwaye ikunike amaxesha amnandi, nokuba kuhambo lothando, ukuphumla okanye kwiofisi yasekhaya eyahluke kancinane nengalibalekiyo, sinokuthi. Ngubani ongafuni mzuzu wokusabela kula maxesha? Sicinga ngayo yonke into ukuze ube neentsuku zokuthuthuzela nokuphumla, ukuba uthanda ukupheka, sinesakhiwo esipheleleyo sokuba ulungiselele ukutya kwakho, uya kufumana iziphakamiso esizilungiselela ngokunyamekela emva kokuqinisekisa ukubhuka kwakho.
Khawufane ucinge uvuka, uvule umnyango kwibalcony yethu kwaye konke okubonayo lihlathi elihle kunye nelizwe elimnandi. Zive ukhululekile ukuba nesidlo sakusasa sakho kwibalcony okanye ngaphakathi kwe-chalet, ebusuku, ungaphuthelwa ithuba lokonwabela iinkwenkwezi, sikwindawo enelungelo, ndinokuthi: isibhakabhaka apha simnandi, ukongeza kwiinkwenkwezi, nawe ngokulula uya kuyigcina iiplanethi, indlela njengamasi kwaye ezinye Hewana, loo nto intle.
Kwindawo yasemaphandleni yaseCórrego do Bom Jesus, emazantsi eMG, iBairro Pereiras yindawo enobuhlobo kunye neyamkelekileyo ebumelwaneni, apha uya kufumana eyona mifuno ilungileyo kunye neziqhamo (rhoqo ngoLwesibini nangoLwesihlanu). Ukutya okuvela eMinas, isiselo esinxilisayo saseConfra da Mantiqueira, ubuchwephesha obugqwesileyo bomgangatho kunye nekofu emnandi ye-emporium (evulwa ukusuka ngoLwesithathu ukuya ngeCawe).
Umbuki zindwendwe ngu- Luciano Pereira
Kula maxesha obhubhane, uninzi lonxibelelwano silwenza ukude, ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nolwethu ngokunjalo. Siyiqela apha, elilungiselelwe ulwamkelo olungcono kwiindwendwe zethu, uya kukwazi ukubala ngokubuya kukaJosi noFernando, ixesha elizeleyo, sihlala malunga ne-1 km ukusuka kwi-chalet, kumbindi wendawo kwaye siya kuba umsebenzi lonke ixesha nge whatsapp. I-intanethi yethu isebenza kakuhle, uya kuhlala unembuyekezo yethu kuyo nayiphi na imibuzo.
Kula maxesha obhubhane, uninzi lonxibelelwano silwenza ukude, ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho kunye nolwethu ngokunjalo. Siyiqela apha, elilungiselelwe ulwamkelo olungcono kwiindwe…